Serivisy fikojakojana tsara indrindra ho an'ny orinasanao fitantanana fananana
Raha tsy voatazona ny fananana iray dia tsy maintsy ho simbaina ary hisarika fanamarihana ratsy mandritra izany. Midika izany fa ny fonenanao sy ny isa azonao ajanonana ny fidinana, ary ny tarehinao eo ambany dia manomboka manjelanjelatra sy mibontsina. Ny fidiram-bola ambany kokoa amin'ny kaontinao any amin'ny banky dia midika hoe mihasarotra ny mampiasa vola amin'ny fampanjariana ny fananana ary manomboka tsy voafehy intsony ny raharaha.
Zava-dehibe indrindra noho izany ny fiantohana fa voakarakara tsara ny fananana iray hatramin'ny andro voalohany. Mba hahafahana manao izany dia ilaina ny rafitra iray ahafahanao manara-maso ireo olana isan-karazany, ary mahita ny fivoaranao sy ny ekipanao amin'ny famahana azy ireo. Satria ny ankamaroan'ny PMSes sy Channel Managers dia tsy manome fitantanana fikojakojana, ny ankamaroan'ny mpandraharaha amin'ny serivisy dia miankina amin'ny rafitra fanampiny toy ny Asana or Trello hitantana ny asany amin'ny fikojakojana. Miteraka tsy fahombiazan'ny admin ary misy fiantraikany amin'ny tombom-barotra.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Maintenance Management Help manampy?
Zeevou dia mamela anao hitazona ny lohalaharana amin'ny olana rehetra momba ny fikolokoloana. Azonao atao ny manisy olana momba ny fikojakojana amin'ny tanana, manara-maso hoe iza no nitory azy ireo, ary manao ahoana ny fahamaika. Ankoatr'izay, azonao atao ny manampy famaritana sy mampakatra fampidirana hanehoana izay tena mitranga. Zeevou Fix dia mamela anao hanaraka ireo olana rehefa mandroso amin'ny alàlan'ny dingana maro amin'ny famahana.
Raha misy olona iray notaterin'ny vahiny, dia namolavola endrika iray ahafahanao manamarina raha efa nanamarina ny olana ny mpiasa iray na tsia, mba hialana amin'ny sarany antso avo ho an'ny olana mety hitranga noho ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fitaovana iray. nataon'ny vahiny ohatra fa tsy tena olana miaraka amin'izy ireo.
Inona koa, ilay Zeevou Mobile App mamela ny mpikarakara trano hitatitra ny olan'ny fikolokoloana amin'ny fotoana fanadiovana ary hametahana sary na horonan-tsary amin'ilay olana miaraka amin'ny famaritana ny zavatra tsy nety.
ao amin'ny ho avy, izahay dia hiasa amin'ny famelana ny olan'ny fikojakojana omena ho an'ny mpiasa iray, mba hahafahan'izy ireo mijery ireo asa sy manavao anao ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny Zeevou Mobile App.